Android Pie Update ကို သုံးနေတဲ့ Pixel ဖုန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီ ဆိုတဲ့ Google
16 Oct 2018 . 11:06 AM
Google ရဲ့ Pixel Series စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသော Android စမတ်ဖုန်းတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရလေ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း Google က ကိုယ်တိုင် Pixel Brand ကို ကိုယ်တိုင် Hardware အပြင် အကောင်းဆုံးသော Software Optimization တွေနဲ့ ထုတ်ပေးနေတာကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုလည်း Google ကနေ Pixel3စမတ်ဖုန်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ဆိုရင်စတင်ရောင်းချတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Pixel3နဲ့ Pixel3XL စမတ်ဖုန်းတွေဆိုရင်လည်း လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးသော Camera နဲ့ Software တွေပါဝင်တဲ့ဖုန်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pixel users upgrade to new Android releases very quickly; >75% of Pixel users are on the terrific Android Pie release, and more are updating every day. #madebygoogle https://t.co/LPej2BUtHX
— Rick Osterloh (@rosterloh) October 12, 2018
ဒါပေမယ့် Google က သူ့ရဲ့ Pixel စမတ်ဖုန်းတွေကို ကြွားတာကို ဒီနေရာမှာ မရပ်သေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Pixel စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က လက်ရှိမှာ Google ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Operating System တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android9Pie ကို အသုံးပြုနေပြီလို့ Twitter မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Apple က လက်ရှိ iDevice တွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က နောက်ဆုံးထွက် iOS 12 ကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ပြန်ပြီး တုန့်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတွေးစရာဖြစ်လာတာက အခုလိုမျိုး Google Pixel စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က Android Pie ကို အသုံးပြုနေနိုင်ပြီဆိုပေမယ့် လက်ရှိမှာ Pixel ဖုန်းတွေက ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာယူမှုအလွန်နည်းပါးနေသေးတဲ့အတွက် Android OS ကို အသုံးပြုမှုအများဆုံးစာရင်းမှာတော့ Android9Pie က အခုမှ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း Google Pixel ဖုန်းတွေကလွဲပြီး တခြားသော စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေက Android Update ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်မထုတ်ပေးနိုင်တာလည်းပါပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Google က Pixel Brand ကို သာမန် Android စမတ်ဖုန်းတွေကနေ ခွဲထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ရှိမှာ Android ဖုန်းအများစုက Google ရဲ့ Stock Android ကို အသုံးမပြုဘဲ ကိုယ်ပိုင် User Interface ကို အသုံးပြုနေကြသလိုပဲ Google ကလည်း Pixel ဖုန်းတွေသာ သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Software Feature တွေ၊ Optimization တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုအတိုင်းသာ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် Pixel စမတ်ဖုန်းတွေက Google ရဲ့ သီးသန့် Exclusive Feature တွေ၊ အမြန်ဆုံး Software Update တွေကြောင့် တကယ်ကို အကောင်းဆုံးသော Android စမတ်ဖုန်း Brand တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း Pixel ဖုန်းတွေက ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်လာဖို့အတွက်က အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်နေဖို့တင်မဟုတ်ဘဲ ရောင်းအားအနေနဲ့လည်း ယခုထက်ပိုပြီး တိုးလာဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
Google ရဲ့ Pixel Series စမတျဖုနျးတှဟော အမွဲတမျးအကောငျးဆုံးသော Android စမတျဖုနျးတှအေဖွဈ သတျမှတျခံရလရှေိ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကလညျး Google က ကိုယျတိုငျ Pixel Brand ကို ကိုယျတိုငျ Hardware အပွငျ အကောငျးဆုံးသော Software Optimization တှနေဲ့ ထုတျပေးနတောကွောငျ့လို့ပွောလို့ရပါတယျ။
အခုလညျး Google ကနေ Pixel3စမတျဖုနျးတှကေို ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးတုနျးက မိတျဆကျခဲ့ပွီးတော့ လာမယျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၈ ရကျနဆေို့ရငျစတငျရောငျးခတြော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Pixel3နဲ့ Pixel3XL စမတျဖုနျးတှဆေိုရငျလညျး လကျရှိမှာ အကောငျးဆုံးသော Camera နဲ့ Software တှပေါဝငျတဲ့ဖုနျးတှအေဖွဈသတျမှတျခံနရေပွီပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Google က သူ့ရဲ့ Pixel စမတျဖုနျးတှကေို ကွှားတာကို ဒီနရောမှာ မရပျသေးပါဘူး။ လကျရှိမှာ ထှကျရှိထားတဲ့ Pixel စမတျဖုနျးတှရေဲ့ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးကြျောက လကျရှိမှာ Google ရဲ့ အကောငျးဆုံးသော Operating System တဈခုဖွဈတဲ့ Android9Pie ကို အသုံးပွုနပွေီလို့ Twitter မှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက Apple က လကျရှိ iDevice တှရေဲ့ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့က နောကျဆုံးထှကျ iOS 12 ကို အသုံးပွုနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးကို ပွနျပွီး တုနျ့ပွနျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာ တဈခုတှေးစရာဖွဈလာတာက အခုလိုမြိုး Google Pixel စမတျဖုနျးတှရေဲ့ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးကြျောက Android Pie ကို အသုံးပွုနနေိုငျပွီဆိုပမေယျ့ လကျရှိမှာ Pixel ဖုနျးတှကေ စြေးကှကျထဲမှာ နရောယူမှုအလှနျနညျးပါးနသေေးတဲ့အတှကျ Android OS ကို အသုံးပွုမှုအမြားဆုံးစာရငျးမှာတော့ Android9Pie က အခုမှ ၀.၁ ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ဒါကလညျး Google Pixel ဖုနျးတှကေလှဲပွီး တခွားသော စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှကေ Android Update ကို မွနျမွနျဆနျဆနျမထုတျပေးနိုငျတာလညျးပါပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ Google က Pixel Brand ကို သာမနျ Android စမတျဖုနျးတှကေနေ ခှဲထုတျနတောဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လကျရှိမှာ Android ဖုနျးအမြားစုက Google ရဲ့ Stock Android ကို အသုံးမပွုဘဲ ကိုယျပိုငျ User Interface ကို အသုံးပွုနကွေသလိုပဲ Google ကလညျး Pixel ဖုနျးတှသော သီးသနျ့အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Software Feature တှေ၊ Optimization တှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခုအတိုငျးသာ ဆကျသှားနမေယျဆိုရငျ Pixel စမတျဖုနျးတှကေ Google ရဲ့ သီးသနျ့ Exclusive Feature တှေ၊ အမွနျဆုံး Software Update တှကွေောငျ့ တကယျကို အကောငျးဆုံးသော Android စမတျဖုနျး Brand တဈခုဖွဈလာမှာပါ။
ဒါပမေယျ့လညျး Pixel ဖုနျးတှကေ ဒီထကျပိုပွီး အောငျမွငျလာဖို့အတှကျက အကောငျးဆုံး Android ဖုနျးတဈခုဖွဈနဖေို့တငျမဟုတျဘဲ ရောငျးအားအနနေဲ့လညျး ယခုထကျပိုပွီး တိုးလာဖို့လိုအပျနပေါပွီ။